Vaovao - PCB Copy Engineering mampiasa tabilao misy pirinty marobe
PCB Copy Engineering mampiasa tabilao misy pirinty maro sosona
1, PCB Copy Engineering mampiasa tabilao misy pirinty maro sosona
Izany dia azo raisina amin'ny firafitry ny vokatra miaro tena mety: ny sosona afovoany ho an'ny tsipika herinaratra na tany, ny famatsiana herinaratra voaisy tombo-kase ao amin'ny solaitrabe, ny lafiny roa amin'ny fitsaboana insulation, dia afaka mikoriana amin'ny fikorontanana ambany sy ambany dia tsy misy fiantraikany amin'ny tsirairay hafa; Ny sosona anatiny vita amin'ny faritra midadasika amin'ny faritra conductive, ny tariby dia manana capacitance electrostatic lehibe eo anelanelan'ny fananganana takelaka kopian'ny famatsian-tsolika tena ambany, izay afaka misoroka tsara ny taratra tariby sy mahazo tabataba.
2, fitaovana voafantina tsara ny PCB Copy Engineering
Ny fifantenana dia tokony handinika ny fahanteran'ny singa, ary misafidy ny coefficient amin'ny hafanana hafanana amin'ny tabilaon'ny kopia fitaovana kely. Ho an'ny boriborintany avo lenta dia tokony ho mety ny mampiasa ny sarimihetsika hampihenana ny taratra mihodina. Amin'ny safidin'ireo fitaovana lojika, mba hijerena tanteraka ireo mariky ny tabataba ao aminy, dia tsara kokoa ny mampiasa HTL, raha samy mihinana herinaratra dia mety ny fampiasana VDD ≥ 15V CMOS.
3, PCB Copy Engineering vita pirinty fisoratana anarana "feno tany"
Rehefa manao tabilao mihodina matetika, ankoatra ny hatevin'ny tariby vita pirinty amin'ny tany dia tsy tokony hipetrahan'ny faritra rehetra toy ny tariby mihodina ny faritra, ka ny fitaovana akaiky kokoa ny tany. Izy io dia afaka mampihena tsara ny inductance parasy, raha ny faritra midadasika amin'ny tany kosa dia mety hampihena ny taratra taratra. 4, ao amin'ny tabilao misy pirinty misy lafiny iray na roa amin'ny takelaka amin'ny tany
Izany hoe, miaraka amina sombin-tsolika na vy mifatotra amin'ny tabilao vita pirinty ao an-damosina (tontolon'ny welding), na ilay takelaka vita pirinty tratra amina takelaka aluminium na vy roa. Ny takelaka mifototra dia apetraka akaiky araka izay azo atao amin'ny takelaka misy ny pirinty ary tsy maintsy ampifandraisina amin'ny teboka (optimum optimum ground signal) an'ny famantarana ny rafitra. Tsotra ity rafitra ity ary mora ny manao takelaka pirinty fanaovana pirinty maro sosona. Raha te hitady vokatra famoretana tsara kokoa ianao, ny takelaka vita pirinty dia azo apetraka ao anaty boaty vy miaro tanteraka, mba tsy hamokatra, aza mamaly tabataba.
Dingana fanoratana PCB
Ny dingana voalohany dia ny fahazoana sombin'ny PCB, voalohany ao anaty taratasy handraisana ireo singa rehetra amin'ilay maodely, ny masontsivana, ary koa ny toerana, indrindra ny diode, ny làlan'ny fantsona telo, ny làlan'ny elanelana IC. Tsara kokoa ny fakantsary nomerika sary roa avy amin'ny toerana iray. Ankehitriny ny PCB dia mandroso bebe kokoa amin'ny diode triode, ny sasany tsy miraharaha ny tsy mahita etsy ambony.
Dingana faharoa, ravao ny tabilao misy kopia voalamina rehetra, ny vifotsy ao anaty lavaka PAD ary esorina. Diovina amin'ny alikaola ny PCB, ary apetraka ao anaty scanner, ilay scanner hijerena rehefa mila piksela scanner somary avo kokoa, hahazoana sary mazava . Taratasy kofehy dia ho ambony sy ambany miaraka amin'ny rano fikosoham-bary kely, poloney ho sarimihetsika varahina, ho ao amin'ny scanner, manomboka PHOTOSHOP, nandondona takelaka roa ho amin'ny loko miloko. Mariho fa ny PCB dia tsy maintsy marindrano na dia mitsivalana aza, apetraka amin'ny scanner na tsy azo ampiasaina ilay sary scanner.
Dingana fahatelo, amboary ny tsy fitovizan'ny lamba, ny mifanohitra, ny ampahan'ny horonantsary varahina ary tsy ny ampahan'ny fiovan'ny sarimihetsika varahina, avy eo ny sary voalohany ho mainty sy fotsy, jereo raha mazava ny tsipika, raha tsy mazava, avereno ity dingana ity .Raha mazava, ho tafavoaka velona amin'ny TOP sy mainty sy fotsy. Ny endrika fisie BMP an'ny BMP sy BOT. BMP, raha mahita olana ny sary dia afaka manamboatra sy manitsy amin'ny PHOTOSHOP ihany koa.
Dingana fahefatra, ny endrika BMP roa ao anaty rakitra format PROTEL, ao amin'ny PROTEL dia afindra ho sosona roa, toy ny sosona roa amin'ny PAD sy ny toerana misy ny kisendrasendra VIA fototra, izay dingana maromaro alohan'ny hahombiazany tsara, raha misy ny fiviliana , avy eo avereno ny dingana 3.Koa ny birao kopian'ny PCB dia mila asa faharetana tokoa, satria misy olana kely hisy fiantraikany amin'ny kalitao ary alao ny tabilao aorian'ny lalao.
Fahadimy, ny sosona TOP an'ny BMP dia azo avadika ho PCB, mitandrema mba ho lasa sosona SILK, mavo ny sosona, avy eo ianao dia ao amin'ny sosona TOP no manara-maso, ary manamboatra fitaovana arakaraka ny dingana faharoa. Aorian'ny fisarihana dia hamafana ny sosona SILK. Fantatra miverimberina hanoratanao ireo sosona rehetra.
Dingana 6, TOP ao amin'ny PROTEL PCB sy BOT. PCB dia nivezivezy, tao anaty kisarisary mikasika ny OK.
Dingana 7, ny TOPLAYER misy mpanonta laser, BOTTOMLAYER dia natao pirinty tamin'ny sarimihetsika mangarahara (1: 1), apetaho amin'ny PCB ilay sarimihetsika, ampitahao ny lesoka, raha eny, vita ianao.
Teraka A sy ilay takelaka voalohany ilay tabilao mitovy, fa tapany ihany ny vita. Fitsapana, fanandramana teknolojia elektronika takelaka takelaka fanandramana dia mitovy amin'ny takelaka voalohany. Raha vita io. Fanamarihana: raha miloko marevaka sy malefaka amin'ny sisin'ny ao anatiny izy, miaraka amin'izay, miverimberina, ny fahatelo ka hatramin'ny sary fahadimy dia tsy mitovy amin'ny sary fakana takelaka fahadimy, mazava ho azy, te ho tapaka araka ny isan'ny sosona , ny tontonana indroa ankapobeny dia tsotra kokoa noho ny takelaka fanaovana dika mitovy multilayer, takelaka firaketana multilayer mora zahana, noho izany dia mijery sy mitandrina ny takelaka dika mitovy profesora (ao anatin'izany ny lavaka torolàlana anatiny sy ny lavaka fitarihana).